Vaovao - Momba ny Carbide simenitra （II）
1. Ny fananana fototra sy ny fampiharana
Ny carbide simenitra dia manana andiana toetra tena tsara toy ny hamafin'ny avo, ny fanoherana ny akanjo, ny tanjaka sy ny hamafin'ny hafanana, ny fanoherana ny hafanana ary ny fanoherana ny harafesina, indrindra fa ny hamafin'ny haavo sy ny fanoherana, izay tsy miova amin'ny ankapobeny na dia amin'ny hafanana 500 ° C aza. manana hamafin'ny avo amin'ny 1000 ℃. Ny carbide simenitra dia ampiasaina betsaka amin'ny fitaovana fitaovana carbide simenitra, toy ny fitaovana fanodinana, fikosoham-bary, planer, drills, cutter mankaleo, sns., Ho an'ny fanapahana vy, metaly tsy ferrous, plastika, fibre simika, grafit, fitaratra, vato ary vy tsotra. Izy io dia ampiasaina hanapahana fitaovana sarotra amin'ny milina toy ny vy mahatohitra hafanana, vy tsy misy pentina, vy manganese avo, ary vy fitaovana. Ny hafainganam-pandehan'ny fitaovana karbida simenitra vaovao dia avo an-jatony ankehitriny noho ny vy karbônina.
2. Ny fampiharana manokana hafa
Ny carbide simenitra dia azo ampiasaina koa amin'ny fanaovana fitaovana fandavahana vato, fitaovana fitrandrahana, fitaovana fandrefesana, fitaovana fandrefesana, kojakoja mahatohitra vy, fitaovana abrasive metaly, linings cylinder, bearings precision, nozzles, sns. Ny ankamaroan'ireo vokatra etsy ambony ireo dia azo omena an'i Nanchang Ozinina Carbide simenitra.
3. Ny fampandrosoana ny carbide simenitra
Tao anatin'ny roapolo taona lasa, nipoitra ihany koa ny carbide simenitra. Tamin'ny 1969, Soeda (orinasa carbide simenitra maro) nahomby tamin'ny famolavolana fitaovana vita amin'ny karbida titane. Ny matrix ny fitaovana carbide simenitra dia tungstène-titanium-kobalta simenitra carbide na tungstène-kobalta simenitra carbide. Ny hatevin'ny ny surface titane carbide coating dia vitsivitsy microns. Fa raha ampitahaina amin'ny fitaovana carbide simenitra mitovy marika, ny fiainana fanompoana dia nitarina in-3, ary ny fanapahana haingana dia nitombo 25% ny 50%. Nipoitra tamin'ny taona 1970 ny taranaka fahefatra amin'ny fitaovana miloko, izay azo ampiasaina hanapahana fitaovana sarotra amin'ny milina.
4. Ohatra iray amin'ny mpanamboatra carbide simenitra
Nanchang Cemented Carbide Limited Liability Company (NCC raha fohy) amin'ny maha-orinasa lehibe an'ny fanjakana azy, dia manana rojo indostrialy feno avy amin'ny akora manta tungstène ka hatramin'ny fitaovana fikosoham-bary. Izy io dia mamokatra andian-dahatsoratra telo indrindra, vokatra vovoka tungstène, baoritra karbida simenitra & endrika tsy manara-penitra sy fitaovana fikosoham-bary. Ny fanaovana sary sy ny famokarana santionany ary ny fanodinana ny vokatra karbida simenitra isan-karazany. NCC no lot voalohany mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena momba ny kalitao, ary ny vokatra ao aminy dia amidy tsara ao an-trano sy any ivelany, ary mandray tsara ny mpanjifa vaovao sy taloha!
Fitaovana karbida, Carbide simenitra, Solid Carbide End Mills, Milling Cutter, Carbide Tools, Carbide Precision Tools,